Home Wararka Qatar oo hadal lama filaan ah ka sheegtay xiriirka kala dhaxeeya dowlada...
Qatar oo hadal lama filaan ah ka sheegtay xiriirka kala dhaxeeya dowlada Farmaajo
Dowladda Qater ayaa markii ugu horaysay sheegtay in ay dib u eegis ku samaynayaan xiriirka ay la leedahay dowlada Farmaajo.
Hadalkaan ayaa yimid ka dib kulan magaalada Doha ku dhexmaray Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamed iyo Wasiiru Dowlaha Arimaha Dibada Qater Soltan bin Saad Al-Muraikhi.
Dowlada Qatar ayaa horay u joojisay daqliga ay ku kabi jirtay miisaaniyada dowlada Farmaajo. Waxaa iyadana muuqato in Qatar ay dareemayso in dowlada Farmaajo ay qarka ka sii dhaceyso taas oo keentay in ay si tar-tiib ta-rtiib ay ay uga fogaato hogaanka Farmaajo iyo Fahad Yasin.
Qatar News Agency, wakaaladda wararka ee Qatar, ayaa daabacday in intii kulanku socday in “dib loo eegay xiriirka iskaashi ee labada dal ka dhexeeya”.
“Wasiiru Dowlaha Arrimaha Dibadda Sultan bin Saad Al Muraikhi ayaa Arbacadii la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mohamed Cabdirisaaq, oo hadda booqasho ku jooga dalka Qatar ” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaarada arimaha dibada Qatar.
“Intii kulanku socday waxaa dib loo eegay xiriirka iskaashi ee labada dal ka dhexeeya” ayaa lagu soo xiray qoraalka.
Dowladda Qatar ayaa saraakiil Ameerikaan ah waxa ay ku eedeeyeen in ay dhaqaale badan ku siiso Agaasimaha Hay’adda NISA, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, burburinta dastuurka Soomaaliya inkastoo Dooxa ay iska diiday eedaymahaas.